Yiba ngamabhaso aphefumlelweyo kunye neSimposium -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Iibhaso eziphefumlelweyo kunye ne-Symposium
Ukususela kwi-12 ukuya kwi-14 ka-Oktobha iBentley Systems iya kubamba iSymposium kunye ne-Award yeendlela ezifanelekileyo kwiZibonelelo. Esi siganeko siza kwenzeka eCharlotte, eNorth Carolina, ngowokuqala emva kokutshintshwa kwefom yezinto ezaphambi kwee-Awards.
Ngomhla wokuqala, uGregg noKeith Bentley baya kubonisa ukuba iminyaka eyi-25 yenkampani ibe yintoni kunye negalelo labo eliphambili kwi-teknoloji esetyenziswe kuyilo nokwakhiwa kwezibonelelo.
Kwiintlobo ze-17 ezithatha inxaxheba kwiibhaso, iintetho ziya kwenziwa zontathu ezibalaseleyo ukuba ngexesha lemizuzu ye-20 iza kwazisa iprojekthi yazo, impumelelo, iteknoloji yesetyenzisiwe kunye nesisombululo.
Utshintsho oluthile lukhangeleka, kuba oko kwakunjalo ngaphambili iisemina zaya kwiwebhu, unike ixesha elaneleyo kwimiboniso yabathathi-nxaxheba kwiibhaso ezazisakuba nepaneli kunye neefilimu ezimbalwa kwisiganeko sokubonga.
Kuya kuba neendawo zeempendulo kunye nezimpendulo emva kwenkcazo nganye kunye nabameli beendaba baya kuba nethuba lokuthetha ngokubini nababonisi kunye nabantu abaphetheyo kula maziko okanye iinkampani.
Ngosuku lwesibini kuya kubakho iitheyibhile zeengxoxo kwimigca eyahlukeneyo yomsebenzi eya kubandakanya iingcali kunye neengcali ezivela kuzo zombini ii-Bentley Systems kunye nabathathi-nxaxheba kwisimpoziyam. Izinto ezikhethekileyo ziya kuba zezityalo, iiGeospatial, uKwakha, amaQonga obuNtu kunye neTekhnoloji.
Ukusebenzisa i-GIS kunye nolwazi lobunjineli kwintsimi
I-GIS kwirejista yeefa-ukuhlanganiswa kwamanzi kunye nokusetyenziswa kokusebenza
Ubunjineli obuninzi bezobunjineli kumatshini ombane kunye nemigqaliselo yokuhambisa
Ngaphandle kwe-BIM - Ukudibanisa amaqela ahlukeneyo kunye neenkqubo ze-site, imephu, i-geo, i-civil, i-BIM, ulawulo lweenkcukacha zeprojekthi, ukuphononongwa kwe-digital design and coordination
Ukwazi iimfuno zamashishini ekusebenzisaneni nokusebenza kwemisebenzi-usebenzisa iteknoloji ukuxhobisa inkqubo yeprojekthi yokusebenzisana, phantsi kweengozi ezabelwana kunye nemivuzo.
Ukusebenza okuphezulu ekuphathweni kolwazi - ukuphunyezwa kokusebenza kweekomiti zokwakha kunye nokwakhiwa komgangatho wezakhiwo eziphelelwe.
Ukukhawuleza kwenkqubo yeprojekthi (impembelelo yokuvuselela imali)
Ukwakha ulwazi ngolwazi ngemimandla yolwazi ngemisebenzi yoluntu
Ukusebenzisana kweprojekthi kunye nomsebenzi wokuhambisa umsebenzi
Kwiiprojekthi ezili-1,000 2004 ezathi zanikezelwa ukusukela ngo-17, enye iya kunikwa nganye yeendidi ezili-XNUMX zangaphambili. Zonke ziphantsi kwesimaphambili soBuchule.
Cadastre kunye nophuhliso lomhlaba
IiYunivesithi, iiApeports kunye nokufakelwa komkhosi
Iinkonzo kunye noonxibelelwano
Iinkqubo ze-Hydrosanitary kunye namanethiwekhi emvula
Iqela leeprojekthi ezidibeneyo
Kulapho ndikuxelela, ngokuba ngoku ilahlekile ngaphezu kwenyanga nesiqingatha, ixesha elaneleyo lokufumana indiza engabizi kunye nehotele kufuphi nomcimbi.
Okukhethwa kukho ... ukuyeka.